Deegaanka Equinox Desktop (EDE): DE oo yar oo dhakhso leh oo loogu talagalay Linux | Laga soo bilaabo Linux
Deegaanka Equinox Desktop (EDE): DE oo yar oo dhakhso leh oo loogu talagalay Linux
Ku sii wadista dib u eegista joogtada ah ee dhammaan Deegaanka Desktop (DEs) suurtogal ah, iyo ka dib markaan ka wada hadalnay Lumina iyo Draco, maanta waa mid kale, in yar oo aan la garanayn, laakiin si gaar ah u gaar ah kuwii hore, oo magaciisu yahay Deegaanka Equinox Desktop (EDE).
Deegaanka Equinox Desktop (EDE) sida DE, waxyaabaha xiisaha badan leh ee ay leedahay ee laga sheegi karo, waxaa ka mid ah in lagu dhisay Qalabka Fudud ee Fudud (FLTK), shaashad garaaf ah oo hoos timaadda C ++, gaar ahaan qaarkood Maktabadaha FLTK wax laga beddelay (oo la dheereeyey FLTK ama si fudud eFLTK).
Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan guda gelin arrinta ah maailnta ama si fudud EDE, waxaan kaaga tageynaa iskuxirka daabicitaankeenii hore ee laxiriira Lumina iyo Draco, halkaas oo aad kula kulmi karto, marka lagu daro helitaanka xiriiriyeyaasha daabacadaha kale ee la xiriira: Trinity, Moksha, Deepin Desktop Environment ama DDE, Pantheon, Budgie Desktop, GNOME, KDE Plasma, XFCE, Cinnamon, MATE, LXDE iyo LXQT.
1 Equinox: Deegaanka Desktop Yar iyo Degdeg ah
1.1 Waa maxay Equinox?
1.3 Nooca hadda iyo Soo dejinta
Equinox: Deegaanka Desktop Yar iyo Degdeg ah
Waa maxay Equinox?
Sidaad sheegtay degel rasmi ah, waxaa lagu sifeeyaa:
"Degaan yar oo loo yaqaan 'Desktop Environment' oo loo dhisay inuu noqdo mid waxtar badan (wax ka qabasho leh), iftiinka isticmaalka kheyraadka oo leh muuqaal la yaqaan. Taasi waxay sidoo kale ka shaqeysaa Linux, * BSD, Solaris, Minix, Zaurus iyo xitaa XBox."
Intii lagu jiray, qeybta «Ku saabsan ...» (Ku saabsan) oo ka socota Wiki rasmiga ah waxaa lagu sifeeyay qaab faahfaahsan, sida hoos ka muuqata:
"EDE waa adigan Degaanka desktop fudud oo dhakhso leh oo loogu talagalay * nidaamyada nix-u eg. Kaas oo adeegsada qalabka wax lagu duubo ee FLTK GUI oo bixiya muuqaal la yaqaan. Intaas waxaa sii dheer, waxaa loo qaabeeyey si waafaqsan falsafada UNIX, oo macnaheedu yahay inay siiso fuliyayaal gaar ah qayb kasta, si "shaqo loo qabto oo loo sameeyo si sax ah." Tani waxay ka dhigeysaa EDE mid aad u qaabeysan oo waliba fudud in wax laga beddelo baahiyaha gaarka ah iyo shuruudaha isticmaale kasta."
Iftiin iyo soon.
Xiriir saaxiibtinimo leh oo caan ah, maaddaama ay u egtahay inay xusuusiso qaar badan oo ka mid ah Windows 95 interface.
Xawaare aad u fiican ama xawaare bilowga iyo fulinta codsiyada, marka lagu daro waqtiga loo baahan yahay in la soo ururiyo.
Ku habboon kombiyuutarada gaboobay iyo sidoo kale aalado gundhig ah, ama wixii qalab kumbuyuutareed ee maalin kasta socda.
Waxay u isticmaashaa astaamaha C ++ si tartiib tartiib ah, oo u oggolaanaysa bilawga degdegga ah, isticmaalka xusuusta oo hooseeya, iyo wareejinta weyn
Nooca hadda iyo Soo dejinta
Hadda EDE waxay u socotaa nooca xasilloon ee 2.1, kaas oo loo heli karo soo dejinta, labadaba adiga soo dejiso qaybta boggooda rasmiga ah, halka lagu daro, waad arki kartaa sida uruuri oo rakib; sida isaga oo kale goobta rasmiga ah ee Sourceforge, meesha aad sidoo kale ka arki karto wax badan shaashadda xaaladdooda muuqaal ee hadda jirta ama horumarinta garaafka. Oo uu ku jiro qaybta wararka Waxaad ka arki kartaa wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan.
Waxaa xusid mudan, in la yiri DE waa mid dhacay ama aan lahayn isbeddello muuqda tan iyo markii ay qaabkeedii ugu dambeeyay ee horeyba u lahaa wax badan ama ka yar 5 sano tan iyo markii la sii daayay. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad ku milicsato xaaladda hadda jirta ee adiga 2.1 version, waxaad ka heli kartaa feylka isbeddelada isku mid ah, adigoo gujinaya waxyaabaha soo socda isku xirka. In kasta oo ay isku mid yihiin, kuma jiraan meelaha lagu keydiyo Debian haddii si fudud loogu rakibi karo halka, sida ku xusan iyada Wiki aad u fiican.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Equinox Desktop Environment (EDE)», waxyar baa la yaqaan, yar oo dhakhso badan Deegaanka Desktop (DE), oo lagu dhisay Qalabka Fudud ee Fudud (FLTK), Qalab Sawireed oo ka hooseeya C ++; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Deegaanka Equinox Desktop (EDE): DE oo yar oo dhakhso leh oo loogu talagalay Linux
Xfce 4.16 Nooca Tijaabada Labaad Hada Waa Laheli Karaa
Google waxaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta inay si qarsoodi ah xog uga uruurinayso dadka isticmaala Android